Maxaa Sameeya Falanqeeye Weyn? | Martech Zone
Tuesday, May 5, 2009 Axad, Abriil 3, 2016 Douglas Karr
At Shirka Suuqgeynta Suuq geynta eMetrics, Waxaan la yeelanay wadahadal xiiso leh waxa ka dhiga falanqeeye xog weyn. Qol ay ku jiraan falanqeeyayaal qolka ku jira, waa su'aal aad u fiican. Guud ahaan, kooxdii aan la shaqeeyay waxay isla garteen inay jiraan falanqeeyayaal ganacsi iyo falanqeeyayaasha xogta - rajooyinka laga qabay mid walbana wey yara yara duwanaayeen.
Falanqeeyayaasha ganacsigu waxay macluumaadka ku bixiyaan qaab u oggolaanaya go'aannada in lagu gaaro ujeeddooyinka ganacsiga iyada oo maskaxda lagu hayo. Falanqeeyayaasha xogta ayaa si fudud u bixiya xogta. Labaduba waa inay si tayo leh u muujinayaan xogta si ay ugu habboonaato dhagaystayaasha iyo dhagaystayaasha inay awoodaan inay go'aan ka gaaraan jahwareerka ugu yar ee suurtogalka ah.
Waxaa jiray isku raacsanaa in awoodda saameynta falanqeeye ay tahay qodob weyn. Chris Worland oo ka tirsan shirkadda Microsoft geli falanqeeyayaasha 3 baaldiyo caqli badan - the amar qaade, ka saameyn, Iyo go'aanka lagu kalsoon yahay. Dhaqanka iyo qaabdhismeedka ururkaaga ayaa go'aamin doona miisaanka ay leeyihiin falanqeeyayaashaadu.
Andrew Janis wuxuu u karkariyey awoodda falanqeeyayaasha si ay u kala soocaan xogta xiisaha leh ee waxqabadka leh. Dhammaantood waxay isku raaceen in astaamaha dabeecadaha ee gorfeeyayaasha xogta guuleystaan ​​ay yihiin awood u lahaanshaha duubista macnaha guud iyo hareeraha xogta iyo u qaabeynta dhagaystayaasha, fahamka ganacsiga iyo warshadaha, iyo inuu noqdo sayid muuqaal ah
Shaki kuma jiro in shirkad kasta oo weyn ay guuleysan karto ama guuldareysan karto iyadoo lagu saleynayo awoodaha iyo saameynta Falanqeeyayaashooda. Shirkadaha aan weyneyn, shaqaalahaaga badiyaa waxay xirtaan koofiyado kala duwan - qof walbana wuxuu leeyahay qof falanqeynaya xogta oo keenaya natiijooyin. Xulista falanqeeyayaasha waaweyn (ama shaqaalaha falanqeeya) waxay muhiim u tahay guusha shirkaddaada ama guuldaradeeda. Xullo xulo.
May 7, 2009 at 5: 01 PM
Falanqeeyayaasha ganacsigu sidoo kale waa inay ku fiicnaadaan falanqaynta isbeddelka iyo aqoonsiga. Bilowga 3 - 6 bilood wuxuu sameyn karaa ama jebin karaa wax soo saar gaar ahaan qeybta tikniyoolajiyadda meertada-gaaban.
May 8, 2009 at 9: 19 PM
Farriin weyn! Waxaan nahay dadka hal abuurka leh waxay ku kobcaan macluumaadka ay falanqeeyayaasha waaweyni miiska u keenaan si ay ugu farsameeyaan wax soo saarka tooska ah ee suuqgeynta. Waxaan ubaahanahay falanqeeyayaal aad uwanaagsan si aan horay iyo bartanka uga istaagno.